BELIEVE IT OR NOT…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » BELIEVE IT OR NOT……
Posted by fatty on Jul 15, 2010 in Creative Writing, Events/Fundraise, Money & Finance, News |9comments
When I was in France I visited the BURMESE ARTS GALLERY on my holiday and I found that photo from one of my friends who is interested in coin collecting. He has many coins and notes of currency from various countries. He collected series of Myanmar kyats and he showed me this photo.
He said he had been collecting the various kinds of money through many countries. But when he found this photo he was surprised the design of currency.” It was very creative design ” he said. And he asked me if I had some notes of current currency. He wanted to buy. He just had photo, he needed real one. And he also explained me that if he got it, he could make the arrangement to show this creative notes at the BURMESE ARTS GALLERY. And his gallery would be world recorded.
Do you want to know how I replied..? Imagine yourself please. This was last year.
ဒါပေမယ့်လည်း ဒါလေးတွေအတွက် မြန်မာပြည်မှာ လူသတ် ယုတ်မာနေကြတာပါ။
အကြွေတွေများ လက်ထဲ ရောက်လာရင် ယွန်စရာသိပ်ကောင်းတယ် လက်အဆင့်ဆင့် ဖြတ်လာကြတာ နောက်ဆုံးတော့ ပြဲခါနီး စဲစဲ အကုန် တိတ်တွေနဲ့ စိနေအောင် ကပ်ပြီး ဆက်သုံးကြရတာဘဲလေ မတတ်နိုင်ဘူး ပုံထဲကထက်ပိုဆိုးတဲ့ ပိုက်ဆံတောင် ရှိသေးတယ် တကယ်တော့ အဲဒီ အကြွေတွေမှာ ရောဂါပိုးတွေ အများကြီး ကပ်နေနိင်တယ်ဆိုတာ လူတွေသိပါတယ် မတတ်နိုင်တော့ သုံးနေရတာဘဲ။ တချို့ အကြွေတွေဆို တဆင့်တဆင့် ကပ်ထားတဲ့ တိတ်တွေက များလွန်းလို့ အရောင်လည်း ပြောင်း စာလေး နဲနဲသာ ထင်ထားတယ် ၁၀၀ ၂၀၀ ဆိုတာကို ဒါတွေကို လက်ခံသုံးနေရတယ် အဆိုးဆုံးကတော့ ၁၀၀တန်ပါ တော်တော် ရှာရခက်တယ်။
အစုတ်တွေအကြောင်းတပတ်ပြန်ကျော့လာလို့ … ဟိုတုန်းက ရေးခဲ့တာလေးအမှတ်တရ ……
အဟောင်း အစုပ် ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ..
ပိုက်ဆံ အစား အသုံးတည့်တဲ့ ပစ္စည်း တခုခု အစားထိုး သုံးသင့် သလား..
လူတွေ လက်မခံချင်တာမျိုးဆို ဘယ်လို လုပ်သင့်လဲ..
တခု သတိရမိတယ်.. မြန်မာပြည်မှာတော့ ပိုက်ဆံ က နေရာ အနှံမှာနေတဲ့ လူတိုင်း ကိုင်တယ်.. မြို့ကြီး မှာဘဲ ရှိတဲ့ နာမည်ကြီး စူပါ မားကတ်ကြီးတွေ အစီအစဉ် တခု လုပ်ပြီး စလစ်တွေ ထုပ်ပြီး ဈေးဝယ် ပြန်အမ်း စနစ် ဆိုရင်.. စလစ်တွေ စုပြီး.. ဈေးသွားပြန်ဝယ်လို့ ရတယ်။ စလစ်တိုင်းက ပြန်လာချင်မှ လာမှာ ဆိုတော့.. နဲနဲ ပိုပြီး အမြတ်အစွန်း ထွက်လေမလား… ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မရှိတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး အကြံဘဲ ထုတ်ကြည့်တာ။ အဲဒီလို စီမံချက် တခု လုပ်ရင်.. တခုခုတော့ ပေါက်သွားမှာဘဲ..
ပေါက်ဖော်တို့ဆီက အကြွေထုတ်တဲ့နည်းယူပြီး အကြွေစေ့ထုတ်ရင် ပြေလည်သွားလိမ့်မယ် … ကတ်စနစ်တွင်ကျယ်လာရင်လဲ အဆင်ပြေသွားမှာပါ …
ကတ် စနစ်ဆိုတာ ဘဏ် တွေတွင်ကျယ်မှ.. သုံးနိုင်တဲ့ လူတန်းစားတွေ များလာမှ.. ဘဏ်တွေ တချိန်ကတော့ အားကောင်းသား.. နောက်တော့.. နောက်တော့.. ဘာ.. ဘာ… ဘာ ဖြစ်သွားလဲ မသိပါဘူးကွယ်
ယူအက်စ်မှာ ပိုက်ဆံအရွက်လိုက်ကိုင်တာ အင်မတန်ရှားပါတယ်..။
အိပ်ထဲ ၂၀တန်တရွက်ရှိရင်ကို အံသြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိပါတယ်..။ ရာတန်ဆိုတာတော့ ..ပြောမနေနဲ့..ကျုပ်အိပ်ထဲ..အင်မတန်ကိုရှိခဲတာပါ..။အဲလိုဆိုတော့ .. အမေရိကန်တော်တော်များများ မကိုင်တာကို ပြောချင်တာပါပဲ..
မြန်မာပြည် အဲဒီကိစ္စရှင်းချင်ရင် .. ယူအက်စ်ဆန်ရှင်လွတ်မှ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်..။
ကမ္ဘာ့ငွေကြေးတွေနဲ့ အကြွေးစံနစ်တွေစီးဆင်းမှုအကုန်လိုလို ထိမ်းချုပ်ထားတာက .. နယူးယောက်၊ ဝေါစရိက ဖြစ်လို့ပါ..။
အဲဒီကခွင့်ပြုလိုက်ရင်… ငွေတွေအကုန် နံပါတ်တွေအဖြစ်ပြောင်းပြိး .. ပလပ်စတစ်တွေဖြစ်ကုန်တာပါပဲ..။
မန္တလေးဂေဖက်ရဲ့ ပွိုင့်တွေငွေအဖြစ်ပေးရာမှာ ငွေလွှဲစရာမလိုပဲ.. paypal အကောင့်ထဲနံပါတ်အဖြစ်ပြောင်းထည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်.။ အဲဒီလိုဆိုရင် .. ငွေထုတ်ယူရတဲ့အချိန်၊ ခရီးစရိတ်၊ ဆီဖိုးကအစသက်သာသွားမယ်ပေါ့..။ ငွေအရွက်တောင်မမြင်လိုက်ရတော့ပါဘူး.။ အဲဒိကမှ စတိုးဆိုင်တခုမှာ ဒေါ်လာ၁၀၀တန် အကျီ င်္ဝယ်ချင်လည်း အင်တာနက်ကပဲ..၀ယ်ပြီးငွေချေလိုက်ယုံပါပဲ..။
ပြောကာမှ.. တခု သတိရလာမိတယ်.. မြန်မာပြည်က သူဌေး တယောက်ပေါ့ကွယ်.. နိုင်ငံခြားက လာတဲ့ ဘိုတယောက် အနောက်နိုင်ငံက ဆိုပါတော့.. လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေ တူတူလုပ်ပြီး တိုင်းပြည် ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက် မြန်မာ ဘောစိ ညနေစာ ထမင်းကျွှေးတော့.. စားသောက်ဆိုင်မှာ စားချင်တာတွေ မှာ ပြီးတော့.. စားကြ သောက်ကြပေါ့.. ဆိုင်ရောက်တဲ့ အချိန်ကနေ စားလို့ ပြီး ငွေရှင်းတဲ့ အထိ ဘေးက စားပွဲထိုးလေး ၀ိတ်တာပေါ့.. ရပ်ပြီး ဆားဗစ် ပေးနေသတဲ့.. အဲဒါမြင်တော့ နိုင်ငံခြားသားကြီးက အံသြသတဲ့.. မင်းတို့ ဆီမှာ အလုပ်သမား လုပ်အား ဒီလောက် ပေါလား.. ဒါမှ မဟုတ်.. မင်းတို့ ဆီက လူတွေက အပိုတွေ သိပ်လုပ်တာဘဲ.. လူတယောက် ရပ်နေဖို့မှ မလိုတာ.. ငါတို့ဆီမှာ လိုတာ ချပြီး သွားရောကွ.. တချို့ ဆိုင် သေးတွေဆို သူဌေးကော ၀န်ထမ်းကော တယောက်ထဲကွ.. အံသြပြီး ပြောပြီး.. နောက်တခု ပိုက်ဆံ ရှင်းတော့.. မြန်မာ ဘောစိက.. ဟေ့.. လာအုန်း.. ဘယ်လောက်ကျလဲ.. (****) အဲလောက်ကျပါတယ်။ အေး.. လက်ဆွဲအိတ်ကြီး ဖွင့်ပြီး ၀ုန်းဆို.. ၅၀၀တန် အစီးလိုက် ချပြီး ပိုက်ဆံ ကျသလောက် ထုတ်ရှင်းပေးလိုက်သတဲ့.. ဘိုကြီးက မျက်စိတွေ ပြူးပြီး ကြည့်ရှာတယ်။ မင်းတို့ဆီမှာ ပိုက်ဆံ အဲလို ကိုင်ပြီး သုံးတာ ဘယ်သူမှ မလုဘူးလားကွ.. ငါတို့ဆီမှာ မင်းလို ၅၀၀တန် အထုပ်လိုက် အစီးကြီး မပြောနဲ့ အတန်နည်းနည်းလေး ကိုင်သုံးနေတာ မြင်ရင် နီးဂရိုးတွေ ကလေကချေတွေ က လစ်ရင်လာလုတာကွ… မင်တို့ ဆီမှာ စိတ်ချရလို့လား
မြန်မာ ဘောစိက.. ဒါမျိုးက လူတိုင်း ကိုင်နိုင်တယ်ကွ.. ဟွင်းးးဟွင်းးး ဟွင်းး ရိုးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကျွန်တော်မို့ရွာမှာလည်း ပိုက်ဆံလုံးဝ သုံးဘူးဗျ စပါး တတင်း နှမ်း တတင်းလဲပြီး စားလိုက်တာဘဲ အေးရော ပိုက်ဆံဘာမှ မလို စပါးမပိုင်တဲ့ လူကလည်း စါပါးခင်း ကြီး ကွမ်းအစ်ထဲ ထည့်ပြီး ရွာရိုးကိုပေါက် ရှောက်ပြီး စားခြင်တာတွေဝယ် လိုက်တာ အားပါး ခရမ်းမုံလာ ဘာညာ သရကာစုံလို့ ရွာကခြေတန်ရှည် အိမ်ကြီးပါ မမြင်ရတော့ဘူး